Google Maps dia hampiditra vaovao manan-danja tsy ho ela | Androidsis
Omaly dia navaozina ny Google Maps miaraka amina endri-javatra kely vitsivitsy izay miaraka manambara mihoatra ny tsirairay. Fanavaozana ho an'ny manatsara ny lafiny sasany amin'ny fampiharana toy ny fampidirana safidy hampandrenesana toerana malaza vaovao na hampidirina ny fahafaha-manao fikarohana ambanin'ny bisikileta na fomba mandeha. Ny mbola ananantsika dia ny fahatsapana fa mila zavatra misy ranom-boankazo betsaka kokoa avy amin'ity rindrambaiko ity izay nihatsara tsikelikely nefa tsy nisy fampidirana tena ilaina.
Saingy mety hiova vetivety izany rehefa ao amin'ny kinova navoaka omaly, tamin'ny 9.26.1, dia voalaza fa hamoaka endri-javatra maro i Google izay hametraka antsika eo alohan'ny Google Maps vaovao. Tsy hoe hanova tanteraka ilay app aho, fa azontsika atao zarao amin'ny ETA ny fifandraisanay, mamorona hitsin-dalana hivezivezena mivantana any amin'ny toerana mahazatra anao indrindra sy ny fahaizana mamorona sarintany tsy miankina amin'ny tantaran'ny toerana misy anao.
1 Mizara ny ETA anao
2 Midira mivantana amin'ireo toerana tianao haleha
3 Sarintany misy ny tantaran'ny toerana misy anao
Mizara ny ETA anao
Manana an'io endri-javatra io amin'ny fampiharana hafa izahay Ahoana no mety Glympse na Waze tenany, azon'i Google ary nanampy tamin'ny fananana fiasa mahaliana sasany toy ny fampandrenesana fifamoivoizana ao amin'ny Maps. Fampisehoana iray izay afaka manampy antsika hampiseho ny toerana misy antsika amin'ny fotoana tena izy ary amin'izany fomba izany dia mamonjy antsika tsy mila mandefa hafatra amin'ny fianakaviana mba hampisehoana amin'izy ireo izay sisa tavela mba hahatongavantsika amin'ny sakafon'ny fianakaviana. Nozarainay ny ETA ary tsy maintsy mijery ny fampiharana kely fotsiny izy ireo mba hahafantarana tsara hoe aiza no misy antsika amin'ny sari-tany.
Vonona ho amin'izany i Google asio bokotra iray hahafahantsika mizara ny toerana misy antsika amin'ny fotoana tena izy. Endri-javatra lehibe iray hisorohana ny mpamily tsy handefa hafatra amin'ny alàlan'ny finday avo lenta rehefa mitondra fiara. Fihetsika iray izay misy lozam-pifamoivoizana, ka tsy ho ela dia ho hitanao fa tsy ho ela io fampiharana io dia ho hita ao amin'ny app.
Midira mivantana amin'ireo toerana tianao haleha
Ao amin'ny Waze no ananantsika ny safidy hamoronana ankafizinao Avy aiza no ahafahantsika miditra haingana mankany amin'ny asa, trano na izay namboarintsika ary mamela antsika, avy amin'ny mpanao gazety haingana, fa ny làlana iray manontolo dia hita fa misy amin'ny app mba hahafahantsika mankany aminy.
Mpampiasa maro no mampiasa Google Maps mankany mandeha matetika amin'ny toerana sasany, noho izany ny tsy fahazoana miditra mivantana any amin'io toerana io dia zavatra azo atao izao. Ny zava-mitranga izao dia hampahafantatra antsika i Google fa afaka mampiasa an'io endri-javatra io izahay matetika matetika ny mpampiasa mankany amin'ny toerana sasany.
Hanontany antsika izy raha irintsika manampy làlana hitsin-dalana izay matetika no raisinay miaraka amin'ny fiara rehefa mampiasa Google Maps. Mora kokoa ny tsy afaka.
Sarintany misy ny tantaran'ny toerana misy anao
Ity dia endri-javatra hita maso sy manintona indrindra amin'ireo andian-dahatsoratra vaovao izay ho hitantsika tsy ho ela dia nipoitra avy amin'ireo tsipika kaody efa misy ao amin'ny apk Google Maps vaovao. Fitaovana iray azontsika hananana amin'ny tantaran'ny toerana Google eo amin'ny birao sy izay mampiseho ny toerana nisy an'ireo volana lasa teo amin'ny sari-tany.
Ankehitriny, ity endri-javatra ity dia miantefa mivantana amin'ny Android. Amin'ny sarintany azontsika atao jereo ny tantaran'ny toerana misy anay amin'ny fomba tsotra araka ny aseho amin'ity sari-tany hita eto ity. Sarintany izay hiseho manokana amin'ny mpampiasa irery.
Amin'ireo fiasa sisa tavela izay hita tao amin'ny dika omaly, dia efa niresaka momba azy ireo isika omaly ary manasongadina ny safidy herinaratra. mihaona tranonkala malaza vaovao any amin'ny faritra misy anao na aiza no misy azy. Google Maps izay mahazo vaovao mahaliana ary talohan'ny fanandramana safidy hafa, toy ny HERE Maps, dia miasa mafy amin'ny fanatsarana azy i Google, farafaharatsiny farafaharatsiny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Google Maps dia hamela anao hizara ny ETA anao, hiditra mivantana any amin'ny toerana itodiana ary hamorona sarintany misy ny tantaran'ny toerana misy anao